Maxay iskala mid yihiin Soomaalida iyo Yuhuuda | Somaliska
Soomaalida ku kala firirsan daafaha aduunka ayaa lala barbar dhigi karaa qowmiyada Yuhuuda oo iyagu mudo badan sidaa ugu kala firirsanaa caalamka sida uu qabo Per Brinkemo oo ah qoraa si weyn wax uga qora arimaha Soomaalida sidoo kalena ka shaqeeya jaaliyada Somaliland ee Malmö.
Per ayaa qaba in Soomaalidu ay yihiin dad hal abuur leh oo leh dareen ganacsi iyo isku xirnaasho. Soomaalida ayaa si qaldan loola barbar dhigaa bulshada Romada ayuu qoray Brinkemo balse waxa uu qabaa cida saxda ah ee lala barbardhigi karo in ay yihiin Yuhuuda oo mudo boqolaal sano ah ku kala firirsanaa caalamka iyagoo wadamadii ay tageen ku yeeshay saameyn weyn iyo iyagoo ka abuuray ganacsiyo waxtar leh.
dhaqanka baadiyaha ee Soomaalida ayuu la dhacsanyahay Brinkemo isagoo
aaminsan in Soomaalida uu dhaqankaas u suurto galiyay in ay caalamka ku faafaan oo meeshii ay la qabsanwaayeen isaga haajiraan. Waxa uu tusaale u soo qaatay nin Soomaali ah oo ku soo noolaaday wadamada Shiinaha, Germalka, Ciraaq iyo Sweden isagoo ugu dambeyntii Ingiriiska dagey oo ganacsade ka noqday halkaas.
Soomaalida ayaa ah dad diyaar u ah in ay safraan oo aan ka cabsan isbedelka iyo in meeshii ku xumaata ay isaga dhaqaaqaan taasoo la mid ah sidii baadiyaha markii meesha cawsku ka dhamaado ay u socdaali jireen halka roobku ka da’o.
Soomaalida caalamka ku nool ayaa horumar sameynaya waxaa Malaysia jaamacado ka dhigta 2,000 soomaali ah, meelkasta oo ay joogaan Soomaalidu waxay ka sameeyeen xiriiryo ganacsi iyadoo taas ay u sii dheertahay aqoonsiga Soomaalinimada ee meelkasta oo ay joogaan isku aqoonsadaan. Brinkemo ayaa qaba in tani ay faaido u noqon doonto Soomaaliya marka ay nabadi ka dhacdo.
Yuhuuda markii aan u soo laabano ayay sida soomaalida oo kale aduunka ku firirsanyihiin, meelkasta oo ay tageen waxay ka abuureen xirfado iyo ganacsi, Brinkemo ayaa qaba in Soomaalidu ay noqon karaan Yuhuuda afrika iyagoo mar hore ganacsiyo waaweyn ka sameeyeey wadamabada Kenya , Uganda iyo Tanzania iyo xitaa bariga dhexe. Soomaalida Sweden ku nool ayaan la qabin guushaas ay gaareen kuwooda kale taasoo uu aaminsanyahay qoraaga in ay sabab u tahay sharciyada qalafsan ee wadankaan.
Brinkemo ayaa ah nin Soomaalida si weyn u dhexgalay oo fahmay dabeecadooda, waxa uu ku doodayaa in dadka Soomaalida markii loo isticmaalo ereyga reer baadiye ay u qaataan aflagaado balse waxa uu qabaa in aysan sidaas ahayn balse la doonayo in ay ku faanaan waayo reer baadiyanimada ma ahan in aad baadiyaha ku nooleyd ee waa astaanta wadanka. Sweden ayuu tusaale u soo qaatay in loo yaqaan beeralay walow aysan dadka oo dhani beeralay ahayn, sidaa si la mid ah ayaa dhaqanka baadiyaha waxa uu sameyn ku leeyahay xitaa kuwa magaalada.
Ugu dambeyntii ayuu Per Brinkemo ku doodayaa in uu aaminsanyahay in reer baadiyo nimadu ay tahay wax lagu faano oo ay tahay furaha horumarka ee Soomaaliya.
reer magaal says:
May 7, 2011 at 18:54
reer badiyo in uu na dhohomuu rabaa faan reerbadiyo lugu faano waligey ma arkin ee gaalkan dabada cad warkiisa naga daaya somali waa ilmo furcaan malinba kubaa ceey noo qarin ,
Aniga waxay ila tahay in uu arin saxa ah ka dhawaajiyay. Waa in aan ku faanaa asalkeena kaasoo ah baadiyaha. Balse waa in aan iska deynaa geediga badan uma arko taas wax lagu faaidayo ee waa qasaaro. Waa in aan salka dhiganaa goobta aan degno.
Soomaalida Sweden hada dhibaatadaas way haysataa, waa maqlee kamuun hebel aan u guuraa halkaas ayaa lacag badan iyo halkaas ayaa fiican. Qofku waa in uu guri ka dhignaa halka uu degenyahay ilaa in dani ku qasabto in uu guuro. Sidaas ayaan aaminsanahay.
asc dhaqanka rer miiga waa wax lagu faano waayo waa astaantena laakn waxaa ila yaab badan ninka nala barbar dhigay yuhuuda oo dhahayo waxaan waxaan sifiican u dhaxgalay somalida
AASC dhamaantina runti yuhuda waa dad xirxiraan somalidana waa dad firfircon
hadale yuhuda waa dad diintoda an dheldhel oga bixiin iyo dhaqaankoda meelkaaste ku nol yihiin waxaay aad uu jeceyl yihiin wax barashada iyo dadka ugu aqoonbadan yurubta. somalidana waxaa nahay dad jeceyl dhaqaankoda iyo diintoda lakiin waxaa ku lidana xaga wax barashada wuxuuna ka wada an uu qadaay waa dad guraya ah somalida iyo yahuda wadaan kaasta taagtiid waad ku arkeysa
reer baadiye says:
nnkaasi si fiican ayuu noola taliyay. malaha hadaan reer baadiyanimadeena kusoo noqon waan dagi lahayn
sxb ma ogtihiin in soomaalida qaybo ka mid ahi ay Yuhuud ka soojeedaaa. yacnii inay israeli yihiin oo ay asl ahaan ka soo jeedaaaa halka ay yuhuudu ka soo jeedo
Asc dhammaan bahda somalika iyo Soomaalida guud ahaaan.
Run ahaantee maqaalka uu soo qoray Per waxaa dhihi karaa wax badan oo kusaabsan dhaqamada Soomaalida wuu taabanaa. Marka la eego dhanka reer guuraa nimada oo ah astaan weeyn oo lagu garto guud ahaan soomaalida meel walbo oo eey joogaan isla markaana qof walba oo soomaali ah aan dhi karo wuu uga yaraan hal mar wuu ku dhaqaaqay inuu guuro. Waxaan laqabaa Jimcaale fikrada ah in eeysan wanaagsaneeyn guurguurida inoo goob joog u ah hadda magaalo aan daganahay oo inta soomalida kunool eey hadal hayaan ineey guuraan sababo aan aad u badneeyn aawadood.
kir dheh yahuud ilahay nagama dhigo wax nalagu masaalo ma wenay webkaana nacala qabe waaye waasax kuyeh war ninkoow allaaaaaah kabaq naclatullah callayahuud oo yahuud hanala masaalin dad islaamaa nahay oo kudhama diinta islaamka illahyna nama nacaladin yahuudna maba naloo sooqadankaro misaal hana uriyaaqina inta muslim ahay inta ay gaalo yahuuda usaxiixayan in aanahay hadaa adigu jamacoow sida yahuuda utaalo soomali maqaban ra yigaas inta diinta islaamka sax ufahan san mana soo qoraan mataataca gaalda xun ee daadaacdacsanayso ee nin yahoow wax iskula her oo waxaan kamasax meesha waxa kashahaqaysa danaha dadkaada iyo diintaada hadiikale danbi ween aykugu tahay waxyaabaha qaar
Qalanjo isdaji walaal, ma u maleynaayo ninkaan in uu xumaan ka wada isberber dhiga uu sameeyay ee waxa uu ka wadaa xaga dhaqdhaqaaqa iyo horumarka. Runtiina waxaan qabaa in aanan gaarsiisaneyn horumarka ay yuhuudu ka sameeyeen caalamka.
Qalanjo abaayo waa kuugu raacsanahay walahi..Balayo idin ku aragtay dheh ma maantuu wuxuu noo keenay Yahuud iyo somali waa isku mid…qumaya ku qaaday walee…Yahuud aba aduunka ugu necbahe..xaanaq dartiis waba qarxi rabay markan aqriyay baqtigaan meesha ku qoran…waxaba la yabanahay dadkan qaar oo hadalka uu ninkas soo qoray uuba ka socdobo…Israel u guuro dheh markas..mahaas aa ku nuuresiiine.
asc all aniga waxaan u arkaaa ninkaan ka hadlaayo arinta soomaalia in uu qaldan yahay waayo waxa uu isku bar bar dhigay muslim iyo gaal waxaa haboon in ay muslimiinta ay hurdada ka gacaan
May 8, 2011 at 15:39
mida kale jimcaale waxa uu yiri wuu saxan yahay muxuu ku saxan yahay. ninkaan waxa uu u hadlaayaa si dadban aniga waxan u arkaa qofkii ninkaan hadalkiisa ku taageeray in uu dambi galay ilaahay dambi dhaaf haa waydiisto
as.c ,is bar bardhiga uu sameeyay mudane Per, waxee ila tahay in uu ka badbadiyay oo aysan somalidu gaarsiisneyn heerka ay yahuudu ka gaarsiisantahay caalamka ay ku kala firirsantahay, iskaba daa xiligaan ay hogaaminayaan dhaqaalaha qaasatan galbeedka.,qadiyada ninkaan ka hadlayana waa dhinac dhaqaale ee ma ahan wax quseeya diin, yahuudnimana wuxuu ka soo xiganayaa kaliya dhinac qoomiyadeed.
ismaaciil nasta says:
war kir dheh somali iyo yuhuud waxba iskuma galin gaalalada marka ay arkaan dada wax qabsanaaza ama muslimiinta arkaan mel ayee ka bahdilaan
aniga waxaan aamin sanahay somalida waa dad aad u aqlibadan oo firfircoon waana dad ladhihikaro waa xadaari waa dad la dhihi karo waa dad ganacsi waana dad lagu tilmaamikaro dad hal dhaqan leh oo haldiina leh oo melkasta eyjoogaan is yaqaana oo isi sooraadsada oo isi soo akdaga waana ku raacsanahay dhaqankeena inuu yahay reer guuraa waana suura gal iney shabahaan yuhuuda somalida aduunka mel eysan ganacsi ku laheyn majirto luuqad kastana wey ku had laan inbadan ayuu somalida u kuurgalay waxban ayuuna ka ogyahay
Asc dhamaantina biryahan aqbar la aan.swedan
dadkina xata waa niyaad jabeyn waxaan is weydiya miyeyna fursad kale jiriin oo mudaharad lagu sameyo waxaa figrad ahaan ku dari lahay in la jifanin oo dadaalki la si wado ile meel lo jifto lama jogo hadi kale waqtigi wuu si dherana waa ina leys ka luminin waqtiga hadu alle yiraahda sidan uu firinayay data ayaba indhihi nagu xanuunay wax lagu farxana loma jedo warqadihina iyo diidma ayeey bilkaasta ku soo dirayaan